politika fiarovana fiainan'olona | Fomba tsara indrindra mahafotsy Teeth Guide
Tamin'ny ny toerana, ny fiainana manokana ny mpitsidika dia ny tena maha-zava amintsika. Izany fiainana manokana kevitra politika manoritra ny karazana fanazavana manokana dia nandray sy nangonin'ny ny toerana sy ny fomba ampiasaina.
Toy ny maro hafa Internet, ny toerana mahatonga fampiasana ny vatan-kazo antontan-taratasy. Ny fanazavana ao anatin'ny antontan-taratasy iray loga dia ahitana Internet Protocol (IP) adiresy, karazana navigateur, Internet Service Provider (ISP), daty / ora hajia, miresaka / fivoahana pejy, ary maro ny kitika handinika ireo fironana, hitantana ny toerana, mpampiasa lalana ny hetsika manodidina ny toerana, ary hanangona isan'ny mponina vaovao. IP adiresy, sy ny hafa toy izany dia tsy vaovao mifandray amin'ny misy vaovao izay fantatra manokana.
Cookies sy ny Web loharanom
ny toerana no mampiasa mofomamy mba mitahiry fanazavana momba ny mpitsidika safidinao, firaketana an-tsoratra ny mpampiasa-manokana vaovao izay fidirana pejy ny mpampiasa na ny fitsidihana, ampanjifaina Web pejy votoaty mifototra amin'ny karazana navigateur mpitsidika na fanazavana hafa fa ny vahiny amin'ny alalan'ny mandefa ny navigateur.
DoubleClick lokony Cookie
Google, toy ny antoko fahatelo mpivarotra, mampiasa mofomamy mba hanompo dokam-barotra eo amin'ny toerana.
Google ny fampiasana ny lokony mofomamy mahatonga izany mba hanompo doka ny mpampiasa mifototra amin'ny ny fitsidihana ny toerana sy ny toerana hafa ao amin'ny Internet.
Ireo mpampiasa dia mety hiala amin'ny fampiasana ny lokony mofomamy amin'ny alalan'ny fitsidihana ny Google Network doka sy afa-po amin'ny fiainana manokana politika ny manaraka URL – http://www.google.com/privacy_ads.html.
ny toerana tsy misy mahazo na fanaraha-maso ny mofomamy ireo izay ampiasain'ireo fahatelo-antoko mpanao dokam-barotra.
Tokony hanontany ny isanisany politika fiainana manokana ireo antoko fahatelo-lohamilin'ny dokam-barotra ho an'ny tsipiriany bebe kokoa momba ny fanao koa ny torolalana momba ny fomba misafidy-avy amin'ny fanao sasany. ny fiainana manokana ny vohikala politika tsy mihatra ny, ary tsy afaka mifehy ny asa ny, mpanao dokam-barotra na hafa toy izany tranonkala.
Raha te-mankarary mofomamy, mba manao izany ny tsirairay amin'ny alalan'ny mpitety safidy. More antsipirihany fanazavana momba ny mofomamy manokana ny fitantanana amin'ny navigateur tranonkala dia azo jerena ao amin'ny mpitety tranonkala ny tsirairay.
Posted by mahafotsy Teeth Guide -